နံရံပေါ်ကကြမ်းခင်းသို့မဟုတ်ကြမ်းပြင်ပေါ်ရှိဆီလီကွန်အိမ်သာတံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မရှိ | WoopShop®
နံရံပေါ်ကနေဒါမှမဟုတ်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ - silicone toilet brush
အရောင် နံရံကပ်ဆွဲထား Grey က ကြမ်းခင်း - ရပ်နေသည့်အနက်ရောင် Wall Hanging အနက်ရောင် ကြမ်းခင်း - မီးခိုးရောင်
မှစ. သင်္ဘောများ စပိန် တရုတ်နိုင်ငံ ပြင်သစ် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
နံရံကပ်ဆွဲထား Grey က / စပိန် Wall Hanging Grey / တရုတ် Floor-Stand အနက်ရောင် / ပြင်သစ် Floor-Stand အနက်ရောင် / စပိန် ကြမ်းခင်း - အနက်ရောင်၊ တရုတ် နံရံဆွဲထားအနက်ရောင် / ပြင်သစ် နံရံဆွဲထားအနက်ရောင် / စပိန် Wall Hanging အနက်ရောင် / တရုတ် ကြမ်းပြင် - မတ်တပ်ရပ် Grey က / ပြင်သစ် ကြမ်းခင်း - မီးခိုးရောင် / စပိန် ကြမ်းခင်း - မီးခိုးရောင်၊ တရုတ် နံရံကပ်ဆွဲထား Grey က / ပြင်သစ် Wall Hanging အနက်ရောင် / ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ကြမ်းခင်း - မီးခိုးရောင်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ကြမ်းခင်း - အနက်ရောင် / ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း Wall Hanging Grey / ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
နံရံပေါ်ကနေဒါမှမဟုတ်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ - silicone အိမ်သာအုတ် - Wall Hanging Grey / စပိန် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အမျိုးအစား: အိမ်သာ Brush
စတိုင်: Brush Rubber Header Holder
အရောင်များ: Black / Grey
အနုစိတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပြည့်ဝသောအရည်အသွေးမြင့်သောဖြီး၊ အသစ်သောတိုးတက်လာသောသိပ်သည်းသောတောက်ပသောသစ်သီးများအသုံးပြုခြင်း၊ စူပါပိုးမွှားများ၊ သက်တမ်းရှည်ခြင်းတို့ဖြင့်သင့်အားသန့်ရှင်းသောအိမ်သာတစ်ခုပေးသည်။
PP & TPR (Thermo Plastic Rubber) မှပြုလုပ်ထားသော်လည်းအိမ်သာနှင့်ထိတွေ့မှုမရှိခြင်း၊ အမှိုက်များကိုဖမ်းယူခြင်း၊ လုံးဝပုံသဏ္weာန်ကိုအစဉ်ဝတ်ဆင်ခြင်း၊ ကံဆိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်သံချေးသို့မဟုတ်ကွေးရန်သတ္တုမရှိပါ။ လက်ကိုင်သည်ခိုင်မာသော၊ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးကြာရှည်ခံသည်
ကောင်းစွာကိုက်ညီသော၊ ကောင်းမွန်စွာသုတ်။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောတွင်းထွက်ပစ္စည်းများ။ အနားကွပ်နှင့်အနားယူရန်ခက်ခဲသောနေရာများအောက်၌နက်ရှိုင်းသောသန့်ရှင်းရေးဒီဇိုင်း
သက်တောင့်သက်သာမရှိသောစလစ်ဒီဇိုင်း။ ပြီးပြည့်စုံသောသန့်ရှင်းရေးအတွက်နှိပ်စရာမလိုပါ။ ပျော့ပျောင်းသောအမျှင်အမျှင်များသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့။ အားစိုက်ထုတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏အချိန်ကိုသက်သာစေပြီးရေချိုးခန်းကိုအလွယ်တကူဆေးကြောနိုင်သည်
သင့်အိမ်သာကိုလှပပြီးခြစ်ရာကင်းစွာထားပါ။ တံခါးပိတ်အောက်ခြေဒီဇိုင်းသည်သန့်ရှင်းသောလေကိုထိရောက်စွာကာကွယ်ပေးသည်။ သင်၏ WC သည်ယခင်ကထက်ပိုမိုသန့်ရှင်းလိမ့်မည်။
1PCS အိမ်သာ Brush (အကယ်၍ သင် Wall-Mount အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါကနံရံကပ်စတစ်ကာပါ ၀ င်လိမ့်မည်)
ထုပ်ပိုးခြင်းပြိုလဲလာ။ , ဒါပေမယ့်ကုန်ပစ္စည်းများတပြင်လုံးကိုဖြစ်ကြသည်။
အိမ်သာဖြူကောင်းတယ်၊ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ။ အစာရှောင်ခြင်းရေကြောင်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
မော်စကိုမတိုင်မီတစ်လနီးပါးကဖြစ်သည်။ မင်းလိုထုပ်ပိုးခြင်းသူတို့အားလုံးဘောလုံးကစားခဲ့ကြသည်။ အပြင်ပန်းကပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်